Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Almancax
IManavgat Escort manavgat ukuphelezela UBella Escort IManavgat Escort ukuphelezela manavgat indaba yocansi indaba yocansi ohlangothini ophelezelayo ukuphelezela indaba yocansi
Njengo-www.almancax.com, sihlonipha ubumfihlo bakho futhi silwela ukuqinisekisa ukuthi wenza njalo ngesikhathi sakho kusayithi lethu. Izincazelo mayelana nokuphepha kolwazi lwakho lomuntu siqu zichazwe ngezansi futhi zinikezwe ulwazi lwakho.
Njengamaseva amaningi ewebhu ajwayelekile, i-www.almancax.com igcina amafayela we-log ngezinhloso zezibalo. Lawa mafayela; Iqukethe ulwazi olujwayelekile olufana nekheli lakho le-IP, umnikezeli wesevisi ye-intanethi, izici zesiphequluli, uhlelo lokusebenza namakhasi wokuphuma ngemvume. Amafayela we-log awasetshenziswanga ngezinhloso zezibalo futhi aphuli ubumfihlo bakho. Ikheli lakho le-IP nolunye ulwazi aluhlotshaniswa nolwazi lwakho lomuntu siqu.
Singase sikhangise ezinye izinkampani kusayithi lethu (Google, njll). Lezi zikhangisi zingaqukatha amakhukhi futhi zingaqoqwa yizinkampani futhi asikwazi ukufinyelela kuzo.
I-www.almancax.com isebenzisa uhlelo lokukhangisa lwe-Google Adsense. Lolu hlelo lisetshenziselwa i-Google ukuhambisa izikhangiso kumawebhusayithi wokushicilela abonisa i-AdSense yezikhangiso zokuqukethwe. DoubleClick i-DART cookie Iqukethe.
Njengomdayisi wesithathu, i-Google isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso kusayithi lethu. Ngokusebenzisa la makhukhi, inikeza izikhangiso ngokususelwa ekuvakaseleni kubasebenzisi bethu, isayithi lethu namanye amasayithi e-inthanethi.
abasebenzisi Inqubomgomo yemfihlo ye-Google yesikhangiso kanye nenqubomgomo yokuqukethwe Ungavimbela ukusetshenziswa kwekhukhi ye-DART ngokuvakashela. I-Google isebenzisa izinkampani zokukhangisa zangaphandle ukunikeza amasevisi wokukhangisa uma ivakashela iwebhusayithi yethu. Lezi zinkampani zingasebenzisa ulwazi (ngaphandle kwegama lakho, ikheli, ikheli le-imeyili noma inombolo yocingo) kusuka ekuvakasheleni kulezi zamasayithi nakwamanye amawebhusayithi ukukhombisa ukukhangiswa kwemikhiqizo nezinsizakalo ezithandayo. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nalolu hlelo lokusebenza nokuvimbela ulwazi olunjalo ukuthi lungasetshenziswa yizinkampani, thola ukuthi yiziphi izinketho zakho futhi I-NAI Izimiso zokuzilawula ezizimele zabamemezeli (PDF).
Igama elithi "maktad yekhukhi isetshenziselwa ukuchaza ifayela elincane lombhalo ukuthi isiphakeli sekhasi lewebhu libeka kwi-hard drive yekhompyutha yakho. Ezinye izingxenye zesayithi lethu zingasebenzisa amakhukhi ukuhlinzeka ngokulula komsebenzisi. Amakhukhi kanye ne-beacon yewebhu ingasetshenziswa futhi ukuqoqa idatha yokukhangisa ngezikhangiso ezitholakalayo kusayithi. Lokhu kwenziwa ngemvume yakho, futhi ungavimbela lokhu ngokushintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho se-inthanethi.
Isayithi almanx.com inikeza izixhumanisi zamakheli e-intanethi ahlukene kumakhasi alo. i-almanx.com ayinabo obhekene nemigomo yokuqukethwe noma yemfihlo yamasayithi lapho ixhumanisa futhi ikhuthaza amabhanki. Inqubo yokuxhumanisa okukhulunywe ngayo lapha ibizwa ngokusemthethweni njenge-bulunma referencing ..
mayelana nenqubomgomo yobumfihlo eyenziwa ku-almanx.com; Uma unemibuzo, ukuphawula nemicabango sicela uxhumane nathi ku-almanx [at] gmail.com.